Heretic and Hexen: "ဟောင်းကျောင်း" ဂိမ်းများကို GNU / Linux တွင်မည်သို့ကစားရမည်နည်း။ | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | 25/07/2021 06:00 | applications များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
နောက်တကြိမ်၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ င်ရောက်မည် « Gamer world » အထူးသဖြင့်အမျိုးအစားဂိမ်းများကို "ကျောင်းဟောင်း" ကျွန်တော်တို့ဟာကြီးပြင်းလာတဲ့သူတွေကိုဘယ်လောက်ကြိုက်သလဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့သူတို့၊ တချို့လူငယ်တွေနဲ့ကစားရတာကြီးလာတယ် « Retro Games »။ ထို့ကြောင့်ယနေ့အလှည့်သည်အထူးသဖြင့်ဂိမ်းများအတွက်ဖြစ်သည် Heretic နှင့် Hexen.
"Doom, Heretic နှင့် Hexen" ၏ရှည်လျားသောစာရင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် Old School ကဲ့သို့ဂိမ်းများ, ကျွန်တော်တို့ကိုလွမ်းဆွတ်မှုများနှင့်ပျော်စရာအမှတ်တရများအများကြီးဆောင်ခဲ့သော။ ငါတို့သည်ဆက်လက်နိုင်ပါတယ် GNU / Linux ကိုဖွင့်သည် ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် repositories ကိုအတွက်ရရှိနိုင်ပြည်တွင်းရေးအစီအစဉ်များသို့မဟုတ် packages များမှတဆင့် "Chocolate Doom"သို့မဟုတ်ပြင်ပတူ "Doomsday Engine".
၏ခေါင်းစဉ်သို့အပြည့်အဝရတဲ့မီ GNU / Linux ပေါ်မှာကစားနည်း ကြိုက် "Doom, Heretic နှင့် Hexen" ဖြတ်. "Chocolate Doom" y "Doomsday Engine"ကျနော်တို့ချက်ချင်းစာရင်းတစ်ခုချန်ထားမည် ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ ငါတို့ရှာဖွေရန်ဤအမျိုးအစားမျိုး၏ဖြစ်နိုင်ချေများကိုတိုးချဲ့ရန်အကြံပေးသည် ဖြူ:
"GZDoom သည် ZDoom မှပိုင်ဆိုင်သောလက်ရှိဆိပ်ကမ်း (၃) ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခေတ်မီ Operating Systems တွင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် Doom Engine ၏တိုးတက်သောဆိပ်ကမ်းများမိသားစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဆိပ်ကမ်းများသည်ခေတ်မီ Windows, Linux နှင့် OS X တို့တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ မူလဆော့ဖ်ဝဲမှ Id ထုတ်ဝေသောဂိမ်းများတွင်မတွေ့ရသောစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုထပ်ထည့်သည်။ အဟောင်း ZDoom ဆိပ်ကမ်းများကိုအခမဲ့ သုံး၍ အခမဲ့ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။" Doom: DoZ နှင့် GZDoom သုံး၍ အခြားသောအလားတူ FPS ဂိမ်းများကိုမည်သို့ကစားရမည်နည်း။
Wolfenstein - Blade of Agony: GZDoom အတွက်ဗားရှင်း ၃.၀ အသစ်ရရှိနိုင်သည်
1 Doomsday အင်ဂျင်နှင့်ချောကလက် Doom နှင့်အတူ Doom, Heretic နှင့် Hexen
1.1 Doom, Heretic နှင့် Hexen Games ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 Old School အမျိုးအစားဂိမ်းများကို run ရန် applications များ
1.2.2 ချောကလက် Doom
Doomday နှင့်အတူ Doom, Heretic နှင့် Hexen အင်ဂျင်ပါဝါ နှင့်ချောကလက် Doom
Doom, Heretic နှင့် Hexen Games ဆိုတာဘာလဲ။
"Doom သည် ၁၉၉၃ တွင် Id Software မှဖန်တီးခဲ့သောဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မူလ Doom သည် DOS လည်ပတ်မှုစနစ်အောက်တွင်ရှိသည်။ ပြီးတော့ဒီဂိမ်းကအင်္ဂါဂြိုဟ်ရဲ့ဖိုဘော့စ် (Phobos) မှာဘူတာရုံတစ်ခုမှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အာကာသအဏ္ဏဝါပုံစံတစ်ခုပါပဲ။ တစ်စက္ကန့်တွင်ငရဲ၏တံခါးများသည်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးမရေမတွက်နိုင်သောနတ်ဆိုးများ၊ မသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်များ၊ ဤဇာတ်ကောင်သည်ဘူတာတွင်ကျန်ရှိနေသောတစ်ခုတည်းသောလူသားဖြစ်ပြီး၊ မစ်ရှင်မှာအဆင့်မှအဆင့်အထိ (Wolfenstein 1993D ကဲ့သို့) ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။" Doom wiki fandom အပေါ် Doom
"Heretic (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Heretic) သည် Shadowcaster ပြီးနောက်အိုင်ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်ဒုတိယဆက်သွယ်မှုရလဒ်အနေဖြင့် ၁၉၉၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် Raven ဆော့ဝဲလ်မှပေးပို့သောစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှု၏အောင်မြင်သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ထားသော Doom အင်ဂျင်ကို အခြေခံ၍ Heretic သည်အစစ်အမှန်အချိန်တွင်အသုံးပြုရန်ပစ္စည်းစာရင်းစနစ်တစ်ခုကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် FPS အမျိုးအစားတွင်အမြားဖြစ်လာခဲ့သည်။ Id Software သည်ဂိမ်းကိုသူတို့၏အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။" Doom ဝီကီ fandom အပေါ် Heretic
"Hexen: Beyond Heretic (သို့မဟုတ်ရိုးရိုး Hexen) သည် Raven Software မှတီထွင်ထားသောအလယ်အလတ်စိတ်ကူးယဉ် FPS (First Person Shooter) ဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်ပြီးအိုင်ဒီဆော့ဖ်ဝဲမှထုတ်ဝေကာ Warner မှဖြန့်ဝေသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၅ အောက်တိုဘာ ၃၀ တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောကမ္ဘာတွင်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်စကြာ ၀ universeာနှင့်ဇာတ်လမ်း၏ဒြပ်စင်အချို့ကိုအတူတူမျှဝေထားသော Heretic ၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။" Doom Wiki fandom အပေါ် Hexen
Old School အမျိုးအစားဂိမ်းများကို run ရန် applications များ
ကွပ်မျက်ရန် Old School ကဲ့သို့ဂိမ်းများ အပေါ် GNU / Linux များ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်၊ အချို့မှာလူသိများသည် GZDoomနှင့်အခြားသူများထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်စူးစမ်းမရ PrBoom။ ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ထပ် ၂ ခုကိုလေ့လာပါမည်။
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, "Doomsday Engine" ၎င်းကိုအတိုချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
"တိုးတက်လာသောဂရပ်ဖစ်များပါသော Doom၊ Heretic နှင့် Hexen ဆိပ်ကမ်းတစ်ခု။"
မင်းအတွက် ဒေါင်းလုပ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း ငါတို့သည်သင်တို့၏ download လုပ်ပါရန်ရှိသည် .deb format နဲ့ installer ကိုဖိုင် မှ GNU / Linux အတွက်ဒေါင်းလုပ်အပိုင်း။ ထို့နောက်လူသိများသောနည်းလမ်းများနှင့်ပရိုဂရမ်များကို အသုံးပြု၍ CLI သို့မဟုတ် GUI interface မှတဆင့်အလွယ်တကူထည့်သွင်းပါ။ ထို့နောက်၎င်းကို run ရန်၊ အထူးသဖြင့် applications menu မှတစ်ဆင့်။ ပြီးတာနဲ့ execute နဲ့ start, ငါတို့ hosted ဘယ်မှာညွှန်ပြရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် .wad သို့မဟုတ် .pk3 ဖိုင်များ အပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်း၏ Doom, Heretic နှင့် Hexen, ယခင်ကမည်သည့်လမ်းအတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့သို့မဟုတ်ရရှိသော။
မသန်စွမ်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက အပေါ် "Doomsday Engine" မင်းဆီကိုလည်ပတ်နိုင်တယ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် GitHub.
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, "Chocolate Doom" ၎င်းကိုအတိုချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
"Doom ဆိပ်ကမ်းကို ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်းကဖွင့်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Doom အတွေ့အကြုံကိုသစ္စာရှိစွာပြန်ထုတ်ပေးသည်။ "
မင်းအတွက် ဒေါင်းလုပ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း သင်သည်သင်၏ download လုပ်နိုင်ပါတယ် .tar.gz format ဖြင့်ရင်းမြစ်ဖိုင် မှ download အပိုင်း။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အမှု၌သင့်အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း terminal (console) မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ပြီးဖြစ်သည် GNU / Linux ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ခြင်းအခန်း.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းကတည်းက Linux ကို Respin လုပ်ပါ ကိုခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linuxအပေါ်အခြေခံပြီးသော MX Linux ကို 19 (Debian 10), ငါတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ပါတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် «Snapshot MX Linux လမ်းညွှန်» ၎င်းကို၎င်း၏ repositories တွင်ပါဝင်သည်။
ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံထားသည့်နေရာကိုညွှန်ပြ terminal မှသာ run သင့်သည် .wad ဖိုင်များ အပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်း၏ Doom, Heretic နှင့် Hexen, ယခင်ကမည်သည့်လမ်းအတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့သို့မဟုတ်ရရှိသော။
မသန်စွမ်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက အပေါ် "Chocolate Doom" မင်းဆီကိုလည်ပတ်နိုင်တယ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် GitHub.
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်ယနေ့ခေတ်အထိများစွာသောအရာများစွာကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်သည် လွမ်းဆွတ်ခြင်းနှင့်ပျော်စရာ« Old School »အမျိုးအစားဂိမ်းများကဲ့သို့ "Doom, Heretic နှင့် Hexen", များစွာသောအခြားသူများအကြား, မရရှိနိုင်ပါနှင့်ကစားနိုင်ပါတယ် Windows ကို, ဒါပေမယ့်လည်းလက်ရှိအပေါ် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း operating system များကဲ့သို့ GNU / Linux များ။ နှင့်ကဲ့သို့ repositories ကိုအတွက်ရရှိနိုင်ပြည်တွင်းရေးအစီအစဉ်များသို့မဟုတ် packages များနှင့်မသာ "Chocolate Doom"အဖြစ်ပြင်ပအဖြစ် "Doomsday Engine".
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Heretic and Hexen: GNU / Linux ပေါ်ရှိ "Old School" ဂိမ်းများကိုမည်သို့ကစားရမည်နည်း။
ဂီတ - အသစ်ပြန်လည်နှင့် GNU / Linux အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာဂီတဖွင့်စက်